Inonakidza kwazvo pfungwa dzeIOS 10 uye watchOS 3 | IPhone nhau
Inonakidza kwazvo iOS 10 uye watchOS 3 pfungwa
Tiri pakati paApril, zvinoreva kuti pane atove asingasviki mwedzi miviri kusvika pekutanga mabetas e iOS 10, macOS 1.0 (?) uye WatchOS 3. Kusvika panguva iyoyo, kana maminetsi mashoma zvisati zvaitika, hazvigoneke kuziva kuti anotevera anoshanda masisitimu eApple, asi isu tinogona kufungidzira kuti mashandiro akakwana anoshanda angave akaita sei. Ichi chinhu chinoitwa nevakagadziri uye Ralph Theodory akagadzira pfungwa eese ari maviri masisitimu anoshanda eApple.
Pfungwa yeTheodory, yakareba kupfuura yenguva dzose mumhando iyi yezvisikwa, inoratidza "nyowani" mabasa, senge QR muverengi pane yemuno kamera yeiyo iPhone. Zvinoenderana nekodhi reTunes, tinogona kubvisa mamwe maapplication akaiswa muIOS nekutadza, uye iri rimwe basa ratinoona mune ino pfungwa yeIOS 10. Chinhu chinotonyanya kufadza, iyo system yaizotikumbira kuti tizvisimbise isu patanga tiri kuita shanduko dzakakosha, chimwe chinhu chandingade, zvirinani kudzivirira chero munhu anowana iPhone kubva pakuidzima uye kutitadzisa kuiwana neKutsvaga yangu iPhone.
1 IOS 10 pfungwa ine maficha ayo isu tese tingade kuve nawo
2 iOS 10 yeIpad
3 WatchOS 3
IOS 10 pfungwa ine maficha ayo isu tese tingade kuve nawo
Chinhu chandisingaone chakakosha asi zvirokwazvo vashandisi vazhinji vanoita, kugadziriswazve patsva kwaizoverengerwawo muMusic application. Zvandinoona zvinonakidza panguva ino ndidzo sarudzo nyowani, senge iyo kusaenzana (hongu, ndapota) kana mukana wekuita kuti mumhanzi udzime mushure menguva yakati usingaende kune zvimwe zvinoshandiswa, senge alarm.
Uye iyo Kurumidza Dial? Panguva ino, nekuita 3D Bata chiratidzo pane iyo Foni yekushandisa icon, tinogona kuwana edu matatu aunofarira mazita. Izvo zvinotaurwa naTheodore ndezvekuti isu tinogona kuita zvakafanana panhamba yekufona manhamba, uko nhamba yega yega yaizoenderana neyekubatana. Nei Apple anga asina kufunga izvi?
iOS 10 yeIpad
Muvhidhiyo murefu iye anotiratidzawo kuti iyo iOS 10 ingave yakaita sei pahwendefa reapuro. Chinhu chekutanga chandinoona uye ndinochida: maapplication eApple anomhanya paIpad ane dhizaini yakatosiyana, kunge hwindo rinotenderera rakasiyana kwazvo neakavhurika akatwasuka maonero atinawo izvozvi. Asi chinhu chakanakisa nezve chiitiko ichi ndechekuti isu taigona gadzirisa izvi zvinoshandiswa sekunge zviri windows pane desktop inoshanda system.
Kune rumwe rutivi, Kudzora nzvimbo ingadai iine mabhatani matsva anogona kugadziriswa zvinoenderana nezvatinoda. Kubva kuCC tinogona kuita zvinoitwa nebhatani rekutanga tisinganyure bhatani chairo (zvarisinganyanye kukosha paIpad), dzima piritsi kana kufonera Siri, mabhatani maviri anonakidza, chaizvo. Theodore akasanganisirawo akawanda-mushandisi mune yake pfungwa yeIOS 10 yeIpad, chimwe chinhu chave chiripo kubvira iOS 9.3 asi chinogona kungoshandiswa muzvikoro.
Iko kunogadzirirwa nemugadziri kwakanyanya mune inotevera sisitimu yekushandisa yeApple Watch, chimwe chinhu chinonzwisisika kana tichifunga kuti iwo musika wakakura. Iyo Theodore pfungwa's watchOS 3 inopa chimwe chinhu chandinofunga inyaya yenguva isati yarova iyo WatchOS App Store: yechitatu mapato. Tinogona kufunga kuti aiwa, kuti iyo iPhone haisanganisi misoro inogadziriswa, asi ini ndinofunga kuti iyo iPhone haigone kufananidzwa neApple Watch mune iyi pfungwa sezvo wachi yeapuro inosanganisira madhiri akasiyana evashandisi vakasiyana.
Kune rimwe divi, ino watchOS 3 inosanganisirawo zvakatsaurwa kunyorera kweManotsi uye Zviyeuchidzo uye mukana we sangana nemidziyo yese uchishandisa iyo account imwechete iCloud, iyo zvakare inosanganisira iyo iPad. Watoisa kare, wadii zvakare kuisa Mac? Zvingangodaro, Theodore aida kutarisa pama mobile operating system pane block.
Pane ese maficha uye dhizaini dhizaini akaverengerwa mune ino pfungwa, chii chawakanyanya kufarira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Inonakidza kwazvo iOS 10 uye watchOS 3 pfungwa
iOS 9.3.1 vs iOS 9.2.1: Performance performance uye bhatiri hupenyu